Site na: KongoLisolona: February 1, 2020 00: 40 Enweghị asịsa
1. A na-ahụta ụmụ nwanyị gbara okirikiri dịka ndị mara mma kemgbe mbido oge.
2. A na-ese okwu? Ma ọbụlagodi sayensị kwuru na ha bụ sexy.
3. Ha mara mma karịa mgbe ha nwere ntụkwasị obi na onwe ha.
4. Ha nwere agụụ.
5. Ha nwere, maka akụkụ ka ukwuu, ezigbo ara.
6. Ha nwekwara oche nwere ike iche.
7. Ọtụtụ ụmụ nwanyị a ma ama nwekwara ụdị.
8. Inwe akụkụ akụkụ bụ ime.
9. Ke ndina, ha yiri ka ha esighi ike. Anyị nwekwara ike inwe obi ụtọ dị ukwuu.
0. Ha na-eme ihe ọchị.
1. O yikarịghị ka ha na-ekpe ndị ọzọ ikpe ma na-akatọ ntụpọ.
2. Ha juru afọ.
3. Enwere ọtụtụ “nnukwu” ụdị na-abawanye ụba, nke na-egosi na ịma mma nwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị.
4. Ọ bụrụgodị na ha dị ime, ha na-enwe mmekọahụ.
Ejela ije naanị gị - rụọ ọrụ wee wuo otu maka ndụ ka mma na ọdịnihu: nke a bụ nkuzi ndụ… (VIDEO)
Ọkt28 07: 29